Maitiro Ekubhadhara - ASFO Chitoro
Pamusoro pe "Pfuurira Kunze", unogona kusarudza imwe yenzira idzi mu "Kubhadhara" sarudzo:
(Inotenderwa chero inotengwa zvakananga pa www.asfo.store.
Mushure mekuzadza iyo fomu yekuraira, iwe unozoendeswa kune iyo yekubhadhara peji. Pairi, iyo inoratidzwa yako yekurongeka's organisation, chirevo uye mutengo. Yako oda ichazotumirwa kana tangogashira kubhadhariswa kuratidza.
Isu tinoziviswa isu pachako kana kubhadhara kwaitwa, saka haufanirwe kuti titumire chero gwaro rinotsigira rayo.
Kana iwe uine chero mibvunzo, usazeze kutibata nesu kuburikidza neVatengi Tsigiro yedu Sevhisi kana kutumira email pa contact@asfo.store.
Kana ukasarudza iyo kiredhiti kadhi sarudzo (VISA kana MASTERCARD), iwe unozoendeswa kune yakachengeteka kubatana isu kuti tiwane HiPay mvumo.
Iwe unozobvunzwa zita remuridzi wechikadhi, zuva rekupedzerwa uye kodhi yekuchengetedza, iri kurudyi kurudyi kadhi kadhi siginari kumashure kwekadhi uye inogadzirwa nenhamba nhatu, yakatarwa CVV (yekuzivisa kodhi). Kuitira kuti Shopping yako ive yakachengeteka, tinoda kuti, kana uchishandisa Kiredhiti Kadhi, iwe unoisa 3 kana 4 kuchengetedzwa kodhi nhamba (CVV). Sezvo iyo kodhi iri chikamu chekadhi pachayo, chero kuyedza kwekunyepera kunodzivirirwa zvakachengeteka. Iyi mhando yenzira yekubhadhara inosanganisira mubhadharo wekuwedzera uye inowedzera 1.6% kune iyo yekuraira kukosha kwayo.
Iyi nzira yekubhadhara inoshanda chete kune Kumba Kuendesa kweMishonga mairairo kana kana iwe uchigara muMaia District uye vakawedzera zvinhu zvisiri Mishonga kukaraji yako.
Cashpoint / Point-ye-yekutengesa Terminal
Chero iwe paunosarudza iyi nzira yekubhadhara, uya wekutumira ane po-yekutengesa terminal kuitira kuti iwe ugone kuita yako yekubhadhara panguva yekuzvitakura.
Kana iwe uine chero mibvunzo, usazeze kuti ubate yedu Vatengi Support Service.
Chero iwe paunosarudza nzira yekubhadhara iyi, murume wekutakura anenge achinja kuti, kana iwe usina huwandu chaihwo hwemari yekubhadhara kwekuraira, zvinokwanisika kuzviita panguva yekuzvitakura.
Fomu reodha, invoice uye mareti.
Matsamba akapihwa newebhusaiti uye otumirwa otumirwa neemail haana kukosha, asi anoshanda segwaro rinotsigira rekuisa mirairo kana mamiriro ezvinhu ari mairi. Zvakare, magwaro anopihwa neHiPay pamubhadharo hauna chero kukosha kwe accounting. MaInvoice nemarisita ane kukosha kwe accounting anotopihwa neinvo software uye inotumirwa pamwe neodhi yako kana kutumwa pamusoro pekutora-up kwekutora.
Kune chero kujekeswa kana zano, taura nesu.